घर भत्किँदा ६ जनाको मृत्यु, घाइते ६ जनाको कस्तो छ अवस्था ? – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाचार/घर भत्किँदा ६ जनाको मृत्यु, घाइते ६ जनाको कस्तो छ अवस्था ?
काठमाडौं, ३ कातिक । पहिरोले घर भत्काउँदा धनकुटाको चौबिसे गाउँपालिका–१ गडेरेमा ६ जनाको मृत्यु भएको छ । मंगलबार राति खसेको पहिरोमा ६ जना घाइते छन् ।
बुहारी विनालाई प्रदेश अध्यक्ष बनाउदै प्रचण्ड !